Thumela 3 ibeka umatshini wethanga le-decorticator kubathengi baseSudan
I-peanut ikwabizwa ngokuba yi -nutnut isisityalo esisesomzimba esikhuliselwe ubukhulu beembewu zayo. Ubusi buhluthwe ngaphezulu 22.2 iihektare zesigidi kwihlabathi liphela, isetyenziselwe amashumi eminyaka njengomthombo obalulekileyo wokufumana iiprotheyini kubantu abakumazwe asakhasayo, ngelixa ioyile yayo, ikhekhe kunye nohluzo zisetyenziswa ngokwesiko njengokutyiswa kwezilwanyana.Kukhula ngokubanzi kwiTropiki nakwiTropiki, njenge-Asia ne-Afrika. kubaluleke kakhulu kwimveliso encinci nakwinkulu kwezorhwebo.
Lo mgubo womthonyama wase Mzantsi Melika uziswe eAfrika ngabaphambukeli baseNtshona Afrika malunga 200 Kwiminyaka eyadlulayo. Namhlanje, ISudan iyaqhayisa 14% Kuwo wonke umhlaba ukuveliswa kwamandongomane,Ungomnye wabavelisi abahlanu abaphambili kwihlabathi lonke ababonelela ngothengiso lwangaphandle oluyimfuneko lwangaphandle eSudan. Inyaniso, Indawo elinywe phantsi kwayo imele malunga 35% yeendawo zizonke eziyimali eziyimali.
Ukuvunwa kwenzeka ekupheleni kuka-Okthobha ukuya ku-Novemba eSudan.Mva kokuba amandongomane amile ngokwaneleyo, abalimi bayayifuna kwaye bayikhuphe kungekudala. Kubalulekile ukuba amandongomane omiswe ngokufanelekileyo kwaye agcinwe kwiimeko ezomileyo. Kodwa kukho umatshini nje omncinci we peanut eselinokunceda umlimi ukuba enze i-peanut shelling.Kwindawo enkulu yeSudan ,yenziwe ngesandla.Abafazi baseMelika bagcina amawaka amawaka eerandi ngesandla. Kwakucotha, Umsebenzi wentlungu owenza ukuba iminwe yabo iphalaze. Ngexesha elide lokulungiswa ,peanut kwiimeko ezimbi zokugcina, banokosuleleka yifungus fungus Aspergillus flavus. Izinto ezininzi zale fungus zikhupha izinto ezinetyhefu nezona zizezona zibizwa ngokuba yi-aflatoxins.if imbewu isulelwe yifungus fungus Aspergillus flavus,iya kuba lilize kwintengiso,Oko kuthetha ukuba umlimi uza kuphulukana neziphumo zabo zonyaka.
Ipeyinti yokuthambisa eSudan
Abanye abantu bayibona le meko kwaye bafuna ukunceda umlimi ukuba enze lo msebenzi ngokulula .Omnye umthengi wethu uyalele 3 cwangcisa umatshini wedizili wepenicut decorticator ekuqaleni kuka-Matshi. uyafuna ukusebenzisa lo matshini wephepha lokucheba ,Kananjalo ufuna ukusebenzisa lo matshini ukufaka igongqongqo kwilali yakhe kwabanye abalimi.Ukungabikho kombane wasekhaya ,ucele ukuba sihambise injini ye-dizeli ye-peanut decorticator.it iyakuba luncedo kakhulu kunemoto yombane kwilizwe lakhe.siye sambonisa nangencwadi enomgaqo-siseko wepeanut decorticatorl.he uthe iyakuba luncedo kakhulu kwimimandla ekude eSudan,Omnye wabahlobo bakhe ufuna umatshini.uyomazisa kuthi.maybe singabambisana ngenyanga ezayo kumatshini wokuchola incindi.